UTylor Ungumntu weNgesi waseNgesi owenza umsebenzi
Umvelaphi woMsebenzi oDumileyo
UTylor ungumntu wesiNgesi igama lomsebenzi, ukusuka kwisiFrentshi saseFransi "styleur" yesi-"tailor" esivela kwisiLatin "italiare," esithetha "ukusika." I-Taylor ingaba nguguqulelo lwamazwe angamazwe aseYurophu afunyanwa ngumsebenzi wezakhono, kuquka uSchneider (isiJamani), uSzabó (isiHungary), uPoroy (isiRashiya), isiRowiec (isiPolish) kunye nesiKleermaker (isiDutch).
Intsingiselo yeBhayibhile kaColon iguqulela ukuba "yembethe isindiso" kwaye igama lithetha ubuhle obungunaphakade.
Funda ngegama likaTylor waseMelika, igama lesipelingi kunye nophando oluthandwa ngabantu abaneenfani.
Igama lomntwana elidumile
UTylor uphakathi kwamazwi amaninzi afunyenweyo, ngenxa yokuthandwa kwawo njengomsebenzi ophakathi. Imvelaphi yegama lakhe ngeNgesi , igama elibizwa ngokuba nguTaylor lisahlula i-# 24 kwoluhlu lwamagama athandwa ngabantu abathandwayo yi-US Administration Security Administration ngonyaka ka-2007. Leli gama elingathathi hlangothi elisetyenziselwa amabini namantombazana e-United States. , ENgilani, eWales, eCanada nangaphezulu.
Abantu abaPhezulu abanegama
UJames Taylor: Umculi waseMelika obizwa ngokuba ngumculi / umbhali wengoma
UZachary Taylor: UMongameli we-12 we-United States
UJohn Baxter Taylor: I-African American Olympic medalist yokuqala
I-Taylor Family Genes DNA Igama Igama
Joyina amanye ama-Taylor abesilisa nabesifazana ekuhleleni iintlobo ezahlukeneyo ze-Taylor emhlabeni jikelele ngokusebenzisa i-Y Chromosome kunye novavanyo lwe-DNA.
I-Taylor Family Genealogy Forum
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa lomnxeba wefayile ye-Taylor ukufumana abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho we-Taylor.
Uhlobo lweeNtsapho - I-TAYLOR Genealogy
Fumana iirekhodi, imibuzo, kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca othunyelwe ngegama likaTylor kunye nokuhluka kwayo.
I-TAYLOR Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLondolozo lwentsapho
I-RootsWeb ibamba amanani amaninzi angabhaso adibanisa abaphandi be-Taylor igama.
UCousin Connect - I-TAYLOR Genealogy Imibuzo
Funda okanye uthumela imibuzo yomnxeba weickname Taylor, kwaye ubhalisele isaziso samahhala xa kuthethwa imibuzo entsha kaTaylor.
DistantCousin.com - I-TAYLOR YoGalobal & Imbali Yentsapho
Iinkcukacha zolwazi zamahhala kunye nolwazi lokuzalwa lomnxeba wegama lokugqibela likaTaylor.
Fumana intsingiselo yegama elinikeziwe ngokusebenzisa i-resource Name First Name Meanings. Ukuba ngesizathu esithile awukwazi ukufumana igama lakho lokugqibela kuloluhlu, unako ukubonisa ukuba unobumba ungezelelwe kwiGlosari yegama lokuThetha kunye neMvelaphi.
Iingxelo: Igama lokuThetha kunye neNqalo
Menk, uLars. Inkcazelo yegama lesiJamani-samaJuda amagama. Avotaynu, 2005.
Hanks, Patrick, noFlavia Hodges. Inkcazelo yeSurnames. I-Oxford University Press, ngo-1989.
Igama loMninimandla Intetho kunye Nemvelaphi
Ukupheliswa koNyaka woPhando
BENZISA Igama lomnqophiso kunye nembali yentsapho
Yenza i-Intanethi mfutshane (.URL) Ifayile usebenzisa i-Delphi
Ziyiphi Itheyibhile Yeendlela ezimbini zeeMpawu eziPhakathi?
UFlorence Kelley: Ummeli wezabasebenzi kunye nabathengi
Injongo kunye neMbali yoLuku lomSebenzi
Imfazwe Yehlabathi II: USS New Jersey (BB-62)
Indlela yokudibanisa "Umqeshi" (eBorem)